Wiil ay iska dhaleen Somali iyo Swedish oo ka badiyay caruurta ku kortay qurbaha + Daawo - Latest News Updates
Wiil ay iska dhaleen Aabe Soomaali ah iyo hooyo Swedish ah ayaa ka badiyay caruurta ku kortay dalalka qurbaha amaba ku dhashay, isagoo aad moodo inuu dalka ku noolaan jiray tan iyo markii uu ifka yimid.
Yuusuf Raage oo ku dhashay dalka Sweden da’diisuna tahay 22-sano jir isla markaana ka shaqeeya hay’ad dadka ka wacyi gelisa dhallinyarada daroogada ayaa ka sheekeeyay sida uu ku bartay luqadda Soomaaliga ee uu sida wanaagsan ugu hadlayo, wuxuuna sheegay in waalidiintiisa ay ku barbaariyeen sidii uu u baran lahaa luqadaha labadiisa waalid.
Waxa uu sheegay inuusan weligii tegin dalka Soomaaliya balse uu tegi doono mustaqbalka, isagoona tilmaamay in waxyaabaha u sahlay inuu luqadda si wanaagsan ugu hadlo ay ka mid tahay in saaxibadiisa ugu badan ay yihiin Soomaali, isla markaana waxa uu sheegay inuu isagu dhex galo amaba tago meelaha ay Soomaalida u badan tahay.
Mucjisada lala yaabay ee uu Weriyihii wareysanayay carabaabay ayaa waxaa ka mid ah Sida sahlan ee Yuusuf Raage uu ugu hadlayo luqadda labadiisa waalid ee ka soo kala jeeda dalalka Soomaaliya iyo Swedish.
Caruur fara badan oo qaarkood iyagoo qaangaar ah la geeyay dalalka Yurub iyo Mareykan iyo kuwo ay halkaasi ku dhaleen ku tumanayaan ku hadalka luqadda looga hadlo asal ahaan dalkii ay ka soo jeedeen.
Halkaan toos uga daawo